Tag: Uganda | Sagal Radio Services
Uganda oo diyaar u ah inay magangalyo siiso Madaxweynihii la afgambiyay ee Sudan
Sagal Radio Services • News Report • April 17, 2019
Dowladda Uganda ayaa diyaar u ah inay siiso magangalyo Madaxweynihii hore ee Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir, kaasoo todobaadkii hore xukunka laga tuuray, kaddib banaan baxyo bilooyin socday, oo sababay in Milateriga soo farageliyaan, xukunkana ka tuuraan Cumar Al-Bashiir.
Sagal Radio Services • News Report • June 23, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo kamid ah madaxda ka qeyb galaysa Shirka Isgarab-taagga Uganda ee Qaxootiga, ayaa ku baaqay in qaxootiga Soomaaliyeed la siiyo fursado ay uga shaqeysan karaan dalalka ay martida u yihiin si ay noloshooda u hormariyaan.
14 ruux oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay galbeedka dalka Uganda
Sagal Radio Services • News Report • November 27, 2016
Illaa 14 ruux ayaa lagu dilay dagaa ka dhacay galbeedka dalka Uganda, kaddib markii ay isku dhaceen Ciidamada dowladda iyo maleeshiyo daacad u ah mid ka mid ah boqorada dhaqanka ee dalkaas.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku dhawaaqay Golihiisa Wasiirada oo ka kooban 80 Wasiir, iyadoo isku shaandheyn kooban ku sameeyay qaar ka mid ah Wasiiradii hore.
Uganda oo Qorshenaysa inay Somalia iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kala baxdo Ciidankeeda
Saraakiisha ciidamada Uganda ayaa wada qorshe ay dib ugu eegayaan ciidamadeeda nabad-ilaalinta ah ee ku sugan Somalia iyo Dalka Afrikada dhexe, taasoo u muuqata inay qorsheynayaan inay ciidankooda la baxaan.
Uganda oo markii u horeysay ciidamo dhinaca cirka ah u soo direysa Soomaaliya
Dowladda Uganda ayaa ku dhawaaqday qorshe ay dooneyso inay Soomaaliya ugu soo dirto ciidamo dhinaca cirka ah oo ka qeyb qaata howl galka Midowga Afrika ee AMISOM.
Uganda oo ka cabsi qabta weeraro la mid ah kii Paris inay Al-Shabaab ka geysato Kampala
Laamaha ammaanka Uganda ayaa sare u qaaday dhaq dhaqaaqyada lagu sugayo amniga, kadib weerarkii habeenkii jimcaha ee lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasoo ay ku dhinteen 129 ruux.
Taliyaha ciidamada Uganda Gen Katumba oo uga digey ciidamada Uganda ee Soomaaliya xatooyada
Taliyaha ciidamada Milatariga dalka Uganda Gen Katumba Wamala ayaa uga digey ciidamada Uganda ee u jooga nabad ilaalinta dalka Soomaaliya feejignaan la’aan iyo musuqmaasuq.
Dowladda Uganda oo shaqada ka joojisay 15-Sarkaal ka howlgalayay Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • September 8, 2015
Dowladda Uganda ayaa howlaha ciidanimo ka joojisay 15 sarkaal oo ka mid ah saraakiishooda ugu sareysa ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee dalka Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay in ay faraxumeyn kula kaceen haween Soomaaliyeed.
Booliska Uganda oo ka digay weeraro Al-Shabaab ay ka geystaan magaalooyinka dalkaas
Booliska Uganda ayaa sheegay inay heleen qorshe ay Al-Shabaab ku doonayeen inay weeraro kaga geystaan magaalooyinka dalkaas, inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Haweeney Horay Dambi ugu soo Oogtay Al-shabaab oo lagu Toogtay Kampala
Haweeney hormuud ka ahayd dacwad ay 3 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-shabaab ee Somalia ku lug lahaayeen ayaa lagu toogtay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda.
Col Olanya oo lagu eedeeyay xatooyo shidaal oo dhagaysiga dacwadiisa ka bilaabatay dalka Uganda
Dhagaysiga dacwad loo haystay taliye hore oo ka tirsanaa UPDF oo lagu eedeeyay inuu si xatooyo ku iibsaday shidaal ay isticmaalayeen ciidamada AMISOM ayaa ka bilaabatay dalka Uganda.
Uganda oo laga diiday in Magdhow laga siiyo Diyaarado ka bur buray
QM,ayaa shaacisay in aysan ka bixin doonin Magdhow sedex diyaaradood oo ahaa Nooca Qumaatiga Uduula oo ay la haayeen dowladda Uganda kuswaasoo ku bur buray Buurada Mount Kenya xili ay usoo socdeen dalka Somaliya si ay ugu mid noqdaan Howlgallada Midowga Africa Sandkii 2012.
Uganda oo sheegtay in ay Ka hortagtay Weeraro ay Al Shabaab dalkaasi ka geysan Lahaayeen
Dowlada Uganda ayaa shaaaca ka qaaday unugyo katirsan Xarakada Al-shabab kuwaa oo la’aamisanyahay in ay maleegayeen weeraro de-deg uga dhaca wadankaasi gudihiisa,sida ay kuwarameeso safaaada Mareykanka ee caasimada Kampala.
Dowladda Uganda oo sheegtay inay deegaan cusub ka Qabsadeen Al-shabaab
Ciidamada ka socda dalka Uganda ee AMISOM qaybta ka ah ayaa la sheegay inay kala wareegeen Al-shabaab deegaanka Koruyel oo 250-km u jira Muqdisho, sida uu maanta shaaciyay sarkaal sare oo u hadlay ciidamada Uganda.
Shirkadda diyaaradaha Air Uganda oo bilowday duulimaadka Soomaaliya Sanado kadib
Sagal Radio Services • News Report • July 8, 2013
Dowlada Soomaaliya oo soo dhaweysay in Air Ugand ay duulimaad ka bilowdo Soomaaliya.